Umatshini opholileyo womoya oManzi kunye nababoneleli - China Umatshini opholileyo woMoya oMatshini
indawo yokusebenzela epholileyo evaporative yomoya China yenza i-XK-18/23 / 25S
I-XK-18/23 / 25S yocweyo lweshishini lomoya opholileyo opholileyo yeyona nto ipholileyo yomoya opholileyo. Siyile ngamagunya ohlukeneyo 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw ukuhlangabezana nemfuno ezahlukeneyo. Kwaye kukho phezulu, ezantsi, ukukhupha umoya kwicala ukuba lifakwe ngokufanelekileyo eludongeni, eluphahleni nakwezinye iindawo.
I-12cm entsha yokupholisa ubushushu kumatshini wokupholisa umoya we-XK-18/23 / ST
Ukupholisa umoya kwi-Industrial nge-12cm iiphedi zokupholisa luphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwe-XIKOO ngo-2020 Ukubumba kwethu inaliti kunye nemodeli yokulungiselela patent yethu kunye nembonakalo yelungelo elilodwa lomenzi. Kubandakanya ukukhutshwa, ukukhutshwa ezantsi kunye nokukhutshelwa ecaleni, kunokuhlangabezana nemfuno ezahlukeneyo zokufaka indawo. I ...
isimungulu semizi yokuhambisa amanzi yomoya opholileyo we-XK-20S
I-XK-20S isimungulu semizi yomoya opholileyo opholileyo yeyona nto ipholileyo yomoya opholileyo. Kwaye kukho phezulu, ezantsi, ukukhupha umoya kwicala ukuba kufakwe ngokufanelekileyo eludongeni, eluphahleni nakwezinye iindawo. Kusebenza ukupholisa isityalo se-60-80m2 kwindawo efumileyo kunye nesityalo se-150-200m2 e ...
Umoya omkhulu opholileyo womoya opholileyo wokupholisa fan XK-30S
Umoya we-XK-30S omkhulu womoya opholileyo wokupholisa umoya womoya uyathandwa ngumoya womoya opholileyo. Iphantsi kwamandla e-3kw nge-30000m3 / h yokuhamba komoya enkulu, kunye nokuhanjiswa komoya okungama-40-50m kumgca wombhobho. Esebenzayo ukupholisa indawo engama-200-250m2 ngesiqwenga esinye. I-XK-30S umoya opholileyo wamashishini opholileyo opholisa umoya oxhotyiswe nge-f ...
Inkqubo entsha yokupholisa umbhobho opholileyo we-XK-25H
Inkqubo yokupholisa i-XK-25H entsha yokupholisa umoya opholileyo yomoya opholileyo yomoya omtsha ophuhliswe yiXIKOO. Kukho phezulu, ezantsi, ukukhutshwa komoya kwicala ukuze kufakelwe ngokufanelekileyo eludongeni, eluphahleni nakwezinye iindawo.Le modeli intsha inepali yokupholisa ephezulu, umphunga ongcono kunye nefuthe lokupholisa. A ...
i-stainless steel big centrifugal yomoya ooler ooler XK-30/35/45 / 50S
XK-30/35/45 / insimbi enkulu centrifugal umoya opholileyo mveliso eyenzelwe workshop enkulu. Ngomoya omkhulu kunye noxinzelelo lomoya, umgama wokuhambisa umoya ukude ube zii-100-200meters. Yenzelwe ukuba ibhande lokulinganisa i-fan ye-centrifugal fan eneqokobhe lesinyithi eliqinileyo kunye nelomeleleyo. High evap esebenzayo ...